Kooxda Man City oo dib ula wareegtay hogaanka horyaalka kaddib guul ay gareen Cardiff iyo Chelsea oo guul raaxo leh ka gaartay Brighton +Sawiro – Gool FM
Kooxda Man City oo dib ula wareegtay hogaanka horyaalka kaddib guul ay gareen Cardiff iyo Chelsea oo guul raaxo leh ka gaartay Brighton +Sawiro
( Premier League ) 3 Abriil 2019 Kooxda Man Citya ayaa guul muhiim ah ka gaartay Kooxda Cardiff City kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League , natiijada kulanka ayaana ku soo dhamaaday 2-0
Kulana ciyareedka oo aha amid aad uxiiso badan ayaa qeebtiisa koowaad lagu kala maray 2-0 oo ay ku hogaamineyso kooxda Man City xili ay xaaladu ku xumeyd kooxda reer Wells ee Cardiff City .
City waxaa goolka koowaad ee ciyaarta u dhaliyey xidogooda Kevin De Bruyne kaddib caawin uu ka helay daafac reer Farane ee Aymeric Laporte daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta .
Man City ayaa ku gacan sareysay kulanaka marka laga fiiriyo dhan walba iyaga oona mar kale helay goolkii labaad ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey xidiga rere Germany ee Leroy Sane daqiiqadii 44-aad ee ciyaarta .
Qeebtii kowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray 2-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda Man City wallow kooxda Cardff ay soo bandhigatay bandhig aad u liitay kaddib markii ay sameyeen hal shuut oo qura qeebtoo hore ee ciyaarta .
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta Kooxda Man City ayaa sameesay dhowr fursadood oo kale oo gool loo filan karay balse uu nasiibka ka saaciday .
Kooxda Cardiif ayaa ku dhibtootay in ay helaan gool iyaga oona samyeye labo isku day oo qura oo gool loo filan kara dhamaan ciyaarta halka kooxda Man City ay sameesay in kabadan 10 –jaanis .
Ugu dambeen kulan ciyareedka yaaa ku soo dhamaaday 2-0 aay guushu ku raacday Kooxda Man City iyaga oona dib ula wareegay hogaanka horyaalka Premier League .
Dhinca kale kooxda Chelsea ayaa guul raaxo leh ka gaartay kooxda Brighton & Hove Albion iyaga oona soo tiigsaday meel u dhow booska afaraad eekala sareenta horyaalka Premier League waxa ayna booska kala baxday kooxda Manchester oo u dhacday booska lixaad .
Bules ayaa kooxda Brighton & Hove Albion waxa ay kaga adkaatay 3-0 waxaana goolasha u kala dhaliyey xidigaha kala ah Olivier Giroud, Eden Hazard iyo Ruben Loftus-Cheek oo kulankisii labaad oo xiriir ah gool dhalinaya .
Valencia oo dhagta dhiiga u dartay Kooxda Madriid hal dhibicna u soo jirsatay kaalinta afaraad ee kala sareenta horyaalka +Sawiro